आईपीएलः विराट कोहली भर्सेस सन्दीप लामिछाने, भारतीय कप्तानको विकेट भत्काउलान ? - Everest Dainik - News from Nepal
आईपीएलः विराट कोहली भर्सेस सन्दीप लामिछाने, भारतीय कप्तानको विकेट भत्काउलान ?
काठमाडौं, चैत २४ । इण्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई इण्डियन्सले तेस्रो जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा सनराइजर्स हैदरावादलाई ४० रनले पराजित गर्दै मुम्बईले तेस्रो जित निकालेको हो।
राजिब गान्धी क्रिकेट स्टेडियममा मुम्बईले दिएको १ सय ३७ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको हैदरावाद १७ ओभर ४ बलमा अलआउट हुँदै ९६ रनमा समेटियो। हैदरावादका लागि दिपक हुड्डाले सर्वाधिक २० रन जोडे। यस्तै जोनी बैयर्सट्रो र मनिष पाण्डेले समान १६ -१६ रन जोड्दा डेभिड वार्नरले १५ रन बनाए। मोहमद नाबी ११ रनमा पेभेलियन फर्किए।
याे पनि पढ्नुस दिल्ली र मुम्बइबीचको खेल शुरु, मुम्बई गर या मर को अवस्थामा
हैदरावादलाई सस्तैमा समेट्न अल्जारी साहीम जोसेफले ६ विकेट लिए। कीर्तिमानी प्रदर्शन गरेका जोसेफले ३ ओभर ४ बलमा एक मेडनसहित मात्र १२ खर्चिएर ६ विकेट लिएका थिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ३६ रन बनाएको थियो।
याे पनि पढ्नुस कोलकाता नाइट राइडर्स आइपीएलको ‘सेमीफाइनल’ मा, शुक्रबार हैदरावादको सामना गर्ने
मुम्बईका लागि काइरन पोलार्डले अविजित ४६ रन बनाए। यस्तै क्विन्टन डी ककले १९ रन जोड्दा इशान किशनले १७ तथा हार्दिक पाण्डयाले १४ रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ११ रनमा आउट भए। जितसंगै मुम्बईले ५ खेलबाट ६ अंक जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भारतीय कप्तान विराट कोहली आवद्ध रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र नेपाली स्पीनर सन्दीप लामिछाने भएको दिल्ली डेयर डेभिल्स तथा राजस्थान रोयल्स र कोलकता नाइटराइडर्सबीच खेल हुने भएको छ।
ट्याग्स: IPL, sandeep vs virat